Musha Mugadziri, Anotengesa, Fekitori - anoderedza, honye anoderedza, magiya ehonye, ​​mapuraneti magiya mabhokisi, anomhanya anomhanya, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, zvekurima magiya mabhokisi, matarakita magiya, marori magiya, honye gearbox
HZPT zvivakwa zvakapfuura ISO 9001 certification. Nzvimbo dzedu dzekugadzira dzakapasa TS 16949 certification.
Shandisa dzakaonda pfungwa kugadzirisa patsva mabhizinesi maitiro kubvisa asiri-kukosha-akawedzera matanho
Gadzira mubatanidzwa kubva kumutengi kuenda kune yekutengesa
Wona Basa Redu
+ Yakadzika inodzoka kurudyi kona servo worm gearheads
+ UDL kumhanyisa kusiyanisa
+ Worm yokuderedza
+ Cycloidal giya rinodzora
+ Gearbox remuchina wekurima
+ Mapuraneti gearboxes
+ Helical yakagadzirirwa motokari
+ Spiral bevel yakagadzirirwa mota
+ Gearboxes etracors & auto
+ Anokosha anodzora & mabhokisi emagetsi
+ Gearboxes ekudiridza system
+ Worm & Bevel Vashandisi veGear
+ DC diki saizi yakagadzirirwa mota
+ Transmission System yeTMR musanganisi
+ SMR Shaft Yakakwira Deredza
+ Vatakuri venyika
+ Mhete dzemaringi
+ Helical mhete magiya
+ Masiyano magiya
+ Spline miseve & giya miseve
+ Spur magiya & helical magiya
+ Worm magiya & makonye
+ Bevel magiya & sprial bevel magiya
+ Torque ruoko
+ PTO miseve
+ Tarakita yegiya
+ Forklift magiya
+ Magiya emagetsi
+ Magiya epombi dzemafuta
+ Slewing mhete / Slewing Kubereka
+ Pombi Dzemagetsi
+ Hydraulic dhiraivha system
+ Y2 akateedzana mota
+ Y akateedzana mota
+ YD akateedzana akawanda-anomhanya mota
+ YS akateedzana mota
+ YC YL akateedzana mota
+ Mortor zvinoriumba
+ TYGZ mota dzinoenderana
+ TYBZ mota dzinoenderana
+ Electirc mota
+ Kazhinji-Pasi-Permanent-Magnet motors (REPM MOTORS)
HZPT inyanzvi mukugadzira ese marudzi egiya & gearbox & yekumhanyisa chinodzora senge: NRV honye yokuderedza honye giya rinodzora, Yakadzika yekudzora inodzora, Yakadzika inodzoka kurudyi magear gearheads, zvekurima gearboxes, tarakita giya bhokisi, auto gearbox, mapuraneti magiya mabhokisi,…
Kubatanidza kutengeserana, indasitiri uye tekinoroji seyakazara, Hangzhou Ever-simba Machinery Co, Ltd iChina yekumhanyisa yekudzora vagadziri uye giya rinodzora fekitori, isu tiri nyanzvi mukugadzira yekumhanyisa yekudzora, giya bhokisi, inodziya magiya anoderedza uye magiya emabhokisi. Iyo yakazvipira kupa yakakosha, inoshanda uye yehumanist kutapudza mhinduro.
Worm inomhanya inoderedza
Zvaunofunga zvinowira pano. Rongedza kana kubvisa rugwaro urwu rwakapeteredzwa kana muzvirongwa zveMutauro weKurongwa. Iwe unogonawo kutarisa zvinhu zvose zvezvinhu izvi zviri muModrid Design settings uye kunyange shandisa tsika CSS kumagwaro aya mumutsetse Zvidzidzo zvakadzama.
Unipolar turbine inoderedza WKS
WJ DZAKATEVEDZANA WORM REDUCER
WJ akateedzana honye-giya rinodzora chinodzora inoverengeka, chimiro chiri chakanaka, chidiki, Chakamanikidza kuburitsa nguva, kusimudzira kufambiswa kune, ruzha rudiki rune. Inogona kubatana nemagetsi michina kana isina nhanho derailleur ye awl ye UD dzakateedzana nyika zvakananga, chimiro chakakwenenzverwa. Worm giya rinoburitsa gomba, mushandisi musanganiswa inorerekera uye shingairira wega ekisero chete, zvakare inogona kusanganisa vaviri kukotama uye kushandira wega ekisero, Kune hukuru hwakachinjika.
Cyclo Dhiraivha Kuderedza
Udl kumhanya variator nmrv honye giya mbeu inoderedza cycloidal giya rinodzora kukanda simbi honye giya rinodzora helical rakagadzirirwa mota giya bhokisi rekurima michina inonamira bevel yakagadzirirwa mota inodzora inoderedza
Servo worm giya mayunitsi ane matatu marudzi: 45 - 50 - 55 - 63 - 75 - 90, iine mbiri inotungamira honye dhiraivha. Kuruboshwe uye kurudyi parutivi rwehonye shaft uchishandisa akasiyana lead lead, zvichikonzera zino ukobvu zvishoma nezvishoma shanduko, Kuti ugone kufambisa honye. shaft uye gadzirisa backlash.
Isu takazvipira kuvandudza hupenyu hwevanhu uye nharaunda kuburikidza neakavimbika, anoshanda uye akachengeteka ekugadzira manejimendi tekinoroji.
Makambani anopa izvi zvigadzirwa nemasevhisi anovimba nesu kuti tibatsire kugadzirisa akaomesesa emagetsi, emagetsi, uye emagetsi magetsi manejimendi maneja epasi. Nekuti hatife takakanganwa zvinhu zvakakosha. Iri ibasa redu kuona kuti rinoshanda nemazvo.
Yese fekitori nzvimbo
Nyanzvi R&D Injiniya
Kambani inonamatira kune manejimendi chinangwa chehunhu kutanga, mukurumbira mukuru.
24 × 7 tsigiro yebasa ndeimwe yeakanakisa masevhisi mukambani.
24 × 7 rutsigiro rwebasa rinopa masevhisi emhando chero nguva, chero kupi zvako pasi.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tarisa zvigadzirwa zvedu zvinyorwa uye muchina zvinyorwa.
Tsvaga ruzivo rwehunyanzvi kusarudza uye kutenga chigadzirwa
Isu tinobatsira nekuisa uye kutumira mumunda.
Kugadzirisa / Tsiva
Tsvaga matambudziko uye uone maitiro ekugadzirisa.
CHII CHINONZI GEAR REDUCER, Chero ipi?
Munyika yemagetsi emagetsi, pane zvakawanda zvinofamba zvikamu, uye zvinhu zvinogona kuomarara nekukurumidza. Chikamu chakakosha kwazvo cheaya masisitimu mabhokisi emagetsi - michina yemakomponi inotamisa simba kubva kune wekutanga kusimudzira kuenda kumutoro. Kuderedza magiya ndiko kunonyanya kutarisisa muchinyorwa chino.
Pamatanhatu matanhatu akakosha, michina yakapusa, mabhokisi egear anowanzoshandisa iyo Wheel neAxle uye / kana iyo Screw (yekudzora honye) kuita basa zvine mutsindo nekuwana mukana wemuchina. Motors anowanzo gadzirirwa kuti ashande pane yakatarwa "kumukira paminiti" kana RPM uye, nepo kumhanya uku kuchigona kugadziriswa kuburikidza nekushandisa Variable Frequency Drives, mune dzakawanda zviitiko zvinonyanya kubatsira kushandisa seti, yakatarwa giya kurongedza kugadzirisa iyo yekumhanyisa mhanyisa uye nekudaro ichiwedzera torque.
Semuenzaniso, kana mota ikatendeuka pa1800 RPM, uye iyo mota yakabatana ne10: 1 giya rinodzora, rinodzora rinoburitsa 180RPM. Kana iyo mota imwechete iine yakazara mutoro torque ratidziro ye30 lb.ft., zvobva zvaburitswa kubva pa10: 1 chinoderedza (tichifungidzira kugona kwe 85%) ichave 255 lb.ft. kupa kuwedzera kwakakosha muhuwandu hwebasa rinogona kuitwa. Zvakajairika mashandisirwo erudzi urwu angave ekuendesa, uko kugona kugona kunoda kumhanya kumhanya uye kuwedzerwa torque yekufambisa zvinhu kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
Zvigadzirwa edu ainyanya aivigirwa kuna Japan, United States, Jerimani, Southeast Asia uye dzimwe nyika uye kumatunhu. Vatengi vedu vanosanganisira vazhinji veOEM vatengi vanogadzira michina yekuvaka. Isu takabatana pamwe akati wandei emakambani eFortune 500 kuti ave mumwe wevatengesi vavo vakuru muChina.
Isu takatumira kunze zvigadzirwa zvedu kune vatengi kupota pasirese uye takawana mukurumbira wakanaka nekuda kweedu epamusoro chigadzirwa mhando uye mushure-yekutengesa sevhisi. Tinogamuchira noushamwari vatengi vari vaviri kumba nekune dzimwe nyika kuti vatibate kuti titaurirane nezvebhizinesi, kuchinjana ruzivo uye kushandira pamwe nesu.
isu vashandi pamusoro vashandi 1500, uye vane cnc wekushanduka michina uye cnc basa nzvimbo.
isu tiri mumwe weakanakisa mugadziri uye mutengesi muChina, sarudza mhando vagadziri, vatengesi, vatengesi kunze kune china-reducers.com
MIBVUNZO INONYANYA KUSANGANA NEGEAR REDUCERS
Kana zvasvika masystem anosanganisira anodzora magiya, pane mibvunzo miviri inowanzo simuka.
"Ndingasarudza sei chinodzora pabasa rangu"
“Zvandiri izvozvi hazvisi kushanda zvakanaka. Ndingaita sei kuti ndiwane hurongwa huri nani? ”
Mibvunzo miviri iri pasi inouya kuve nemunhu ane ruzivo rwakanaka uye ruzivo anokubatsira iwe nekuvaka yako yakanaka sisitimu. Kana iwe uri mugove, isu tinoda kutaura newe pamusoro pezvauri zvinoderedza gear, uye kana iwe uri kuda mugove, isu tinoda kuti iwe ubatanidzwe kune imwe.
Ma gear anodzora akaomarara asi kusarudza chaicho hakufanirwe kuve. HZPT ine yakasarudzika mhando yehunhu, hwakavimbika, unodhura magiya anoderedza ayo anoenderana nezvinodiwa zvekurima, zviyero, oiri uye gasi, zvigadzirwa, kuchera uye zvimwe!